Ukubuka kafushane kwe-GNOME 3.16 | Kusuka kuLinux
** I-GNOME ** ingenye yezindawo ezihamba phambili zedeskithophu ku-GNU / Linux, ngakho-ke ingenye yezindawo ezidume kakhulu. Yize kungeyona enye yezintandokazi zami, angiyeki ukuvuma ukuthi inezinto eziningi ezinhle, kepha futhi nezinto ezimbi futhi okucishe kube kuncane lesi sihloko.
Umqondo awukona ukukhipha i-GNOME. Kumele siqale emcabangweni wokuthi konke engizokusho ngokulandelayo kungumbono wami kuphela nokuthi engikuthandayo akufani nokwabanye. Sizobona izinto ezinhle, futhi ezimbi, zizama ukungakhethi ngangokunokwenzeka.
Ngiyacacisa futhi ukuthi kuhlala kukhona umuntu ongenalwazi: LOKHU KUNGUMBONO WAMI WAMI
Bengilokhu ngivivinya i-GNOME Shell ** kancane ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, futhi sengingazibona izinto zayo ezinhle nezimbi, kepha-ke, ayihlangabezani nengikulindele futhi ngizokhuluma nangalokho kule ndatshana.
Njengoba sazi, ** i-GNOME 3.16 ** iphume izolo igcwalisa izinhliziyo zabathandi bale ndawo yedeskithophu ngethemba nokulangazelela. Futhi yini imbangela yazo zonke izingxabano? Yebo, ngokombono wabaningi, abenza izinto kahle manje, okungenani iningi labo.
### Izinto ezimbi nge-GNOME 3.16.
Ngiyacacisa, izinto eziningi engizokubalula mayelana nezinto ezingezinhle zingaxazululwa noma zishintshwe ngezandiso, kepha-ke, ngizobhekisa kwiGNOME Shell njengoba ikhulelwa ngabathuthukisi bayo, ngokuzenzakalela nangaphandle kokungezwa.
#### Isimo esibonakalayo samawindi
Angiyena umklami we-interface, kepha akudingeki ube yisazi ukuze ubone ukuthi abafana baseGNOME bazamile ukusondela kakhulu ekubukekeni nasekuzizweni kwe-OS X. Ngubani okumele abasole? Hhayi mina, ngoba yize lokhu kuzoba iphuzu lokuqala elibi, ngakolunye uhlangothi kuyinto engiyithandayo.
Lokhu engikushoyo kungahle kuphikisane, ngakho ngizozama ukuzichaza kangcono. Ukubukeka kwezicelo kanye neMvelo yeDeskithophu ngokujwayelekile ngiyakuthanda, ngoba kusondele kakhulu kwisitayela se-OS X.
I-GNOME Awubanga wedwa ozama ukulingisa * noma * ukukopisha * i-Apple * OS. Ngefilosofi efanayo yekhophi esinayo yobumbano, okuwukuphela kwento engekho ukufaka iDokodo ngakwesobunxele ezansi, okuthile okwabelana ngomklamo weShell we-GNOME, futhi kuzona zozimbili lezi zimo ngokwakhona, azikwazi ukususwa zisuswe endaweni .
Kepha kulungile, uma inhloso ukuletha abasebenzisi be-GNU / Linux okuthile nge ** isitayela ngaphezulu **, baphumelele, noma kunjalo, ukukopisha kwesinye isikhathi kunezinkinga ezithile. Njengoba sonke sazi, i-GNOME manje * ihlanganisa ibha yesihloko nezinkinobho zewindi ngemenyu yamathuluzi *, ngesitayela sangempela se-OS X, kokuthile abakubiza nge-CSD. Kulungile, futhi yikuphi ukungalungi lokhu okuletha?
Kubukeka kuphela okumbalwa, kepha ngobuchwepheshe uma uhlelo lokusebenza lufa, iwindi liyafa ngakho-ke sehluleka ukulilawula. Asikwazi ukuyivala, siyinciphise, noma yini efana naleyo. Futhi ngabe lokhu kubonisa inkinga ukuthi kube iphuzu elibi? Kungenzeka ngithi, ngoba impendulo yalokhu izoncika kulokho esikwenzayo ngesikhathi elenga iwindi .. * (Qaphela labo ababona i-pr0n ngokunyenya ehh) * ..
#### Ugqoko wesistimu omusha
Okuthile abasebenzisi abangakuthandi ukuthi i-GNOME ayikuvumeli ukubeka izinhlelo zokusebenza ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini, okungukuthi, endaweni yephaneli lapho kuthreyi yesistimu okufanele iye khona, kepha bafikile kule nguqulo 3.16 nge Isixazululo: iphaneli elincane ezansi kwesobunxele * ebonakala yeqa * kuphela uma kunezinhlelo zokusebenza ezisebenzisa itreyi yohlelo, nokuthi singakwazi ukufihla noma sibonise.
Kuze kube manje umbono awumuhle, kungani ugcwalisa iphaneli ephezulu ngezithonjana? Kodwa-ke, kunezinto ezimbalwa engingazithandi noma engizithola njengehlulekile:
Itholakala engxenyeni engezansi kwesobunxele, lapho siguqulwa ukuthi ithreyi yohlelo ingakwesokudla, akunandaba ukuthi iphezulu noma iphansi, kepha ingakwesokudla. Lokhu kungangakhululeki kwabanye (nami uqobo).
Uma siyifihla futhi uhlelo lokusebenza oluncishisiwe aluhambisani ne- * new system system * ngeke sithole lutho. Kwabanye kungahle kube kuhle, kimina kubi kakhulu, ngoba izicelo engiziletha kutray * yizo kanye lezo ezidinga ukuba lapho ukuze bangazise futhi basendaweni ebonakalayo.
#### Asinayo ibha yomsebenzi.
Uma sifuna ukushintsha iwindi noma sibone nje ukuthi sivuliwe, yini okufanele siyenze? Ngokuzenzakalelayo, i-GNOME ayifaki izinkinobho ze-Maximize / Minimize emawindini, ngoba abathuthukisi bayo bangacabanga ukuthi sifuna ukuvula wonke amawindi, elinye lingaphansi kwelinye noma kuma-desktops ahlukene.
Kodwa-ke ukubona izinhlelo zokusebenza ezivulekile sinezinketho ezi-3 ngokwazi kwami:
+ Iya ngesikhombisi segundane phezulu kwesobunxele ukukhombisa * ideshibhodi *.
+ Yenza okufanayo kodwa ucindezele ukhiye I-Super L (onefulegi leWindows).
+ Noma shintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza usebenzisa i- Alt + Ithebhu.
Uma uthola noma yikuphi kwalokhu okukhethwa kukho okusebenzayo noma okunethezeka kulungile, kepha kimi akubonakali kufinyeleleka noma kungasebenziseka nhlobo.
#### Izaziso Ezithulile
Enye yezimpumelelo ezinhle zale nguqulo 3.16 yizaziso manje eziya phezulu kanye newashi. Ngizokhuluma ngalezo zakamuva, manje ngizobhekisa kuzaziso zezenzo ezithile ezisebenze ku-GNOME 3.14 futhi manje azisebenzi.
Isibonelo sazo lapho sixhuma idivayisi yangaphandle, isibonelo imemori ye-USB. Yini engalungile, ngabe othile uthole ukuthi sithephe itheku le-USB? Cha, uma singabheki ichashazi eliyindilinga elivela eceleni kwewashi, ngeke sithole.
Ngisho nasezincanyelweni zezaziso ngibona inketho engivumela ukuthi ngingeze amadivayisi akhishwayo njengengxenye yezaziso (thethelela ukungafuneki). Futhi manje, uma umuntu enomusa kangaka, ungangitshela ukuthi ngehlise kanjani idivaysi ekhiphekayo uma isivele ifakiwe ngaphandle kokuvula i-Nautilus **? Ayikho inketho yalo noma kuphi.
#### Izinhlelo zokusebenza zinenketho yokushoda
Ngiyacela, noma ngubani oza nenkulumo yakudala ongadingi ukuthi uyenze ngaphandle kokuphequlula, ukukopisha ama-movie, nokuhlela amadokhumenti, futhi ubulula be-GNOME bukuvumela ukuthi wenze lokho, angazisindisa enkingeni yokuthayipha ukuphawula kwakho. Futhi ngikusho ngenhlonipho, ukuthi umlando ungaphezu kwendala.
[quote] Abaningi bagxeka i-KDE ngoba inezinketho eziningi kakhulu, futhi ngiyazibuza ukuthi ikuphi okungaba ngcono: ukuba nezinketho esingazisebenzisi, kepha sibe nazo uma sizidinga, noma singakaze sibe nazo, noma sizidinga nini? [/ quote]
Yilokho nje okwenzeka kimi nge-GNOME nezinhlelo zayo zokusebenza. Nautilus Umuntu ompofu wenza okuncane nsuku zonke, kungekudala uzoba nezinketho ezimbalwa kunalokho IThunar y I-PCManFM, uma ingakafiki kulelo qophelo. Isibonelo, zama ukuqamba kabusha amafayela amaningi ngasikhathi sinye. Futhi ayingivumeli ukuthi ngibone usayizi wefayela ngaphandle kokuya ezindaweni zalo noma ngilikhethe, ukubeka nje izibonelo ezimbalwa. I-Gedit Kokunye okulungile, kepha hheyi, kukuncane kakhulu okugqamisa imibala ngezilimi ezahlukahlukene.
Ikhalenda elisha elihle kakhulu le-GNOME, ngesitayela esimsulwa se- Maya ikhalenda ye I-ElementaryOS, kepha ukuphatha imicimbi yethu ngokungafani nalokho okubonakala (kufanele kube lula kakhulu), kungaba yikhanda. Ngikumema ukuthi wenze isivivinyo, wakhe umcimbi wanamuhla, futhi lowo mcimbi ofanayo uzame ukuwudlulisela kusasa, ngokumane uwudonse. Azikwazi, kufanele zenze entsha, zibeke okufanayo nezindala bese zisusa endala.
Futhi ngingaqhubeka, kepha ukuqeda ngalesi sigaba sine-** GNOME Control Center **, engeyona elula kakhulu kwezinye izimo, kepha ukuze sifinyelele kwezinye izinketho kufanele sichofoze kakhulu kune-Windows.
#### Ngabe kufanele sikhulume ngezinketho zokwenza ngokwezifiso?
Ngaphandle kwamathuluzi we- * Gnome Tweak Amathuluzi * okungawabeka phezulu awafakiwe ngokwakhona, sizoba nomsebenzi onzima nge * DConf / Gconf-Editor * ngaphambi kokushintsha, ngokwesibonelo, ifonti yohlelo. Kuyiphuzu engizohlala ngiligxeka ku-GNOME entsha.
#### Eminye imininingwane
Isiqalisi sohlelo lokusebenza noma somyalo (i- Alt + F2 ) asinakho ukuqedela okuzenzakalelayo, ngakho-ke kufanele sazi igama eliqondile lesicelo esifuna ukusethula.
### Izinto ezinhle nge-GNOME 3.16
Kepha akuyona yonke into embi, kufanele kushiwo. Ngiyaphinda ngiyasho ukuthi enye yezinto ezithakazelisa kakhulu nge-GNOME Shell 3.16 iyisixhumanisi sayo nokuthi ilula kanjani. Ngendlela ejwayelekile nangokukhulunywa kabanzi, kuyindawo enhle yedeskithophu ngaphakathi kokulingana futhi kufaka ezinye izinto okungenani ezithokozisayo.
#### Amabhokisi noma amabhokisi we-GNOME
Isiphetho sangaphambili seQemu-kvm esifanelwe okungaphansi kokunconywa. Okuthile okuhle ngokubheka ukuthi akekho noyedwa owake wacabanga ukusebenzisa ithuluzi elilula elinjalo ukuze ulisebenzise ngaphambili. Kule nguqulo kulula ukuyisebenzisa futhi kumnandi ngokwengeziwe.
#### Izaziso ezisebenzisanayo
Okuthile ebengikuthanda njalo nge-GNOME Shell, amandla ngokwesibonelo ukuphendula umlayezo wangasese nge-jabber ovela kwisaziso uqobo.
Izaziso ezintsha azizimbi, kepha ukungakwazi ukukhetha lezo esifuna ukuzishiya noma ukusivala kungenza ngingakhululeki kakhulu, ezinye zize zinyamalale kungafuneki muntu, noma zihlala zinamathele futhi azikwazi ukuqedwa (ikakhulukazi ngo-Empathy's, okulandelayo unezimbungulu), kepha uxolelwe. Zipholile kakhulu futhi zitholakala endaweni enhle, zihlala esikhaleni ebesingasetshenziswa phambilini.
# # # # Khiya isikrini
Noma ngabe ikhophi le-Windows noma cha, isikrini sokukhiya se-GDM sihle, futhi ikakhulu uma sinezaziso futhi singazibona ngaphandle kokufinyelela kudeskithophu, yize ngokwengxenye lokhu kungabonisa inkinga enkulu yobumfihlo babasebenzisi.
#### Screencast ususondele
Enye inketho ebengihlala ngiyithanda ngeGNOME Shell ukukwazi ukuqopha ideskithophu yethu ngokuhlanganiswa okhiye okulula: Alt + Ctrl + Shift + R.
Ngaphandle kwabo angingabazi kakhulu ukuthi noma ngubani angaphila isikhathi esingaphezu kwesonto ku-GNOME Shell, kahle, ngaphandle kokuthi abafuni kakhulu. Okuwukuphela kokwehla ukuthi njengamanje iningi lalabo abasebenza ku-GNOME 3.14 sebekhubazekile ku-GNOME 3.16. Kepha ngaphandle kokungabaza bayinto enhle okufanele siyisho.
### Iziphetho ku-GNOME 3.16
Kulabo abathanda ukulula nokulula, ngokungangabazeki bazothola indawo ekahle yeDeskithophu ku-GNOME. Izicelo ezinjengeklayenti elisha le-IRC, amamephu, ikhalenda, kusuka ekuqineni kwabo abazi okuhle, okuhlanzekile.
Ngithanda izicelo eziningi njengesimo sezulu, ezenziwe kahle kakhulu. Kodwa-ke, ekugcineni kosuku uthola ukuthi unokwanele nje ukwazi ukusebenza futhi awukwazi ukukhama ngokuphelele i-Desktop.
Kukhona abanye ebengingeke ngibavivinye njengoMculo, ngoba banginike iphutha lapho ngizama ukubethula ngePython noma into enjalo, noZwela, angisoze ngakwazi ukuvula iwindi lokuxoxa nomngani. Ngicabanga ukuthi kukhona nokunye ukungahambisani ngokwakhiwa (okucacile ukuthi kuhloswe ngamathebulethi), ngoba ngenkathi sithola izinkinobho ezinkulu emawindini, imigoqo yokuhambisa incane kakhulu.
Kepha ngokujwayelekile, ngokukhishwa ngakunye kwe-GNOME sekuya ngokuya kugxile ezinhlosweni zabo futhi banikela ngomkhiqizo ophumelela kakhulu. Ukuthi angikuthandi, ukuthi angikutholi kukhiqiza, kungukuthokoza kwami ​​nje, ngiyazi ukuthi abasebenzisi abaningi bazizwa bekhululekile. Kungaba nezinye izinzuzo engingakazisebenzisi noma engingazazi, ngizozibona nosuku nosuku, noma kunjalo ngizwa iziphakamiso nemibandela kumazwana abekiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukubuyekezwa okufushane kwe-GNOME 3.16
Imibono evezwe kule blog kungukuphela kwesibopho somuntu oyikhiphayo futhi akumele imele ukucabanga kwe-dedelimux.net
umbono wami ukuthi i-gnome yenziwa ngabaqambi bezithombe beshiya eceleni ikhompyutha
Kubukeka kulungile kimi ukuthi i-gnome ayinayo ibha yomsebenzi, yi-super vakano ukuthwala ichopho legundane futhi ubone amawindi ami ngesikhathi sangempela.
Singakwenza futhi lokho ku-KDE, ngokwesibonelo, futhi ngisenayo ibha yomsebenzi 😉
Iphuzu lami ukuthi ngiyayithanda i-GNOME, ngizamile konke ukunambitheka kwamagobolondo futhi akekho osusa ukunambitheka nokwazisa kwephrojekthi enjengale.
Ikhasi elihle kakhulu.
Ngokusobala ayihloselwe thina abaphatha imibhalo eminingana ngesikhathi esisodwa. Ngisho, indlela yokuziphatha ephakanyiswa yi-GNOME ngokwemvelo ayisebenzi kakhulu ekuphatheni imibhalo eminingi ngasikhathi sinye.
Ngizizwa ngathi ngusomkhathi oselizwini ngifuna umkhumbi-mkhathi wakhe uma ngingayiboni ibha yomsebenzi.
IGnome yinhle, bengilokhu ngiyithanda, kepha umqondo wokwenza okuthile ngokuya ngokwengeziwe njalo, kwesinye isikhathi kubonakala kungenangqondo kimi, ngiyethemba ukuthi akugcini njenge-OperaCoast (ehamba ngokuya ngokuthinta nokuchofoza izinkinobho)
Noma ingabe i-OSX Yosemite ikopishe i-TODOOOOOO kusuka eGnome ??? !!! ^ _ ^
Kungaba futhi hehehe.
Uqinisile impela iwindi bekuyikhophi le-osx to gnome hhayi enye indlela ezungeze, uma kungenjalo bheka izinsuku zokukhishwa
Angivumelani neminye imibono njengomsebenzisi ojwayelekile we-Gnome Shell, kepha bayahlonishwa. Ngokubona kwami, ngikholelwa ukuthi ifilosofi yale deskithophu ukuhlinzeka ngezinto eziyisisekelo nezidingekayo ukuze ukwazi ukusebenza, futhi uma ufuna ukuyinweba, ungakhululeka kakhulu ngezandiso (ezingafakwa ngqo ngokuchofoza ekhasini elifanele).
Njengephuzu lokwazi, Ikhalenda wuhlelo lokusebenza olusha olusesigabeni sokuhlola, uhlobo lokubuka kuqala, futhi luzokhishwa ngokuqinisekile kunguqulo 3.18 yeShell. Bangeze futhi enye yama-Ebook.
Isibuyekezo esihle nendatshana enhle, qhubeka njalo. 😉
Siyabonga ngamazwana uChuck Daniels. Eqinisweni, ngiyavumelana nalokho okuphakamisayo, futhi-ke unelungelo lokuthola owakho umbono. Wonke umsebenzisi wehlukile, futhi izidingo ziyahlukahluka. Mhlawumbe sengivele ngivumelaniswe nezinto ezithile i-GNOME enganginiki zona.
Ngiyavuma, yize umqondo wokuSebenza uzohluka ngokuya komunye nomunye. Njengommeli ngidinga ukuba nemibhalo ivulwe ngasikhathi sinye futhi ngihambe kalula kuyo. Ngisho nohlelo lwe-Unity lungenza ngingakhululeki kulawa macala. Ngaphezulu kwalokho uma kufanele ngiye ku-Activities noma ngihlanganise okhiye; noma uma ngidinga ukunciphisa amawindi. Vele, lo ngumqondo onikezwa yi-GNOME ngaphandle kwebhokisi.
Into ngezandiso inhle kakhulu kepha ... ingabe inkinga yokungahlangani kwemitapo yolwazi nama-API isixazululiwe?
Yebo, kepha abantu begobolondo le-Gnome abahlanganisi izinto eziningi ezijwayelekile futhi kukhona ezinye ezingagodli izinketho kuphela kepha ezingekho enembile kakhulu, izinto eziyisisekelo njengokushintsha iphepha lodonga noma ukubukeka. I-GNOME Tweak Ithuluzi uhlelo olungadingekile ngoba izici zalo kufanele zibe nesikhungo sokulawula i-gnome. Futhi enye into ukuthi isikhungo sokulawula i-gnome silinganiselwe kakhulu kunesidingo. Nezinye izinto eziningi umsebenzisi angazilawuli. Igobolondo le-Gnome kumabhuthi kaFedora kusuka kuma-megabyte angama-600 kuye ku-1gb wenqama emshinini we-4gig futhi ayikho indlela yokuxazulula lokhu. Kuyideskithophu ebesiku-beta iminyaka eminingana manje, ingahlanganisi ngisho i-gnome-screen-saver noma i-gnome-session-propities noma ezinye izinketho eziningi ezifana nama-betas.
icala elingavamile kusho
Uqinisile; Abathuthukisi be-Gnome bakunikeza ngemvelo eyisisekelo enethuba lokwelula imisebenzi yayo, okwenza ukuthi kube okusebenzayo kakhulu. Yize bengagxili ekunikezeni ngemvelo ebanzi ebanzi yezinketho. Ngoba ngaleso sikhathi bekungeke kusaba yiminimalist. Kepha lokho akususi ukuthi kungenzeka ubukeke umuhle futhi unamuhla. Ngokuzenzakalelayo kuyathandeka emehlweni futhi kungathuthukiswa ngezindikimba ezahlukahlukene ze-GTK neShell, ezingezimbalwa.
Mhlawumbe into yangokwezifiso idlala indima ebalulekile ekukhetheni imvelo yedeskithophu. Njengoba ngine-PC ngisebenzisa iLinux futhi angisebenzisanga iWindows noma iMac isikhathi eside.
Phendula ecaleni elingajwayelekile
Bekuhlale kuthiwa ukuqhathanisa kunenzondo. Futhi lokhu kungaba yisibonelo. I-Kde ingahle isebenze ngokwengeziwe, kepha inzima futhi i-Gnome-Shell ilula futhi iyashesha. Ngamandla nobuthakathaka babo, womabili la madeski avumelekile, ngombono wami othobekile.
Usuvele wakusho ekuqaleni umbono wakho womuntu siqu.
Angifuni ukungena ekuqhathaniseni, kodwa ukusho njengamanje ukuthi i-KDE inzima kune-GNOME, noma ihamba kancane, kungaba ngamanga alingana neLanga. Noma kunjalo, kufanele sibone lokho okubiza ngokuthi "kusindayo" kuleli cala.
Angikaze ngithi i-GNOME ayisebenzi, ngasho (ngamanye amagama) ukuthi ayingixazululi, ukuthi ayifani. I-GNOME yindawo enhle yedeskithophu, kepha akuyona eyami.
Sengivele ngithi, i-KDE ine-Konqueror ngo-1.2 GB.
IGnome enesiqingatha seFirefox.
Njengoba uDiazepan asho: "Zombili zisinda ngokuphelele futhi ziphelele kakhulu."
Ku-KDE ngeFedora ngiqale ubuningi obungaba ngu-800mb ngesiqalisi se-homerun esidle kuphela cishe i-250mb naku-distro efanayo kepha ngegnome shell noma isinamoni ideskithophu ingangiqala uma noma cishe ngo-1200mb okungenani cishe ngo-900mb ngaphandle kwethuba lokwehlisa izinsiza izindawo. Ngine-4-core CPU ne-1gb Nvidia ihluzo ne-4 RAM angicabangi ukuthi kufanele ukusebenza okuhle ngalezi zinsizakusebenza ku-gnomeshell noma eCinnamon.
ukuze amawindi "Yenza okufanayo kodwa ucindezele ukhiye weSuper L (onefulegi leWindows) uvele." Lokho kubonakala kukuhle kimi, ngoba nginakho konke ngokhiye we-Win, nakho konke ngekhibhodi futhi angidingi ukuya noma kuphi negundane. Ngemuva kwe-Key Win ngibona amawindi ami ngesikhathi sangempela, futhi futhi uma ngifuna ukuvula okuthile ngivele ngikuthayiphe kancane bese kuba yikho…
Vele, ngithanda ukunciphisa nokunye ... (engikushintsha ngamathuluzi wokumisa)
"Awukwazi ukukhama ideskithophu uye ezansi" ... kungaba yini ukukhama phansi kwideskithophu? Ukubingelela nokubonga!
I-Gnome yinhle kakhulu kepha ngokuya kude ne-pc yendabuko yedeskithophu eyenzelwe isikrini sokuthinta inezandiso ezithile ezisizayo kepha ngandlela thile azinakwa
Ngikhetha isinamoni yize zombili zimbi ku-pc yami .-.
yingakho ngihlala ne kde
Bamba i-KDE endala, akukho okunye okubalulekile ... hahahaha
ICinnamon ipholishwe kakhulu ezikhathini zakamuva, iba ideskithophu esebenza kakhulu, kakhulu kuneGnome uqobo, yize emasontweni ambalwa edlule ngafaka iMint kumzala wami futhi iqiniso ukuthi ngiyitholile "inzima" ... Ekugcineni waqeda nge-KDE, kusobala ukuthi Ubonge kakhulu evela eWindows ... kubi kakhulu ukuthi ngemuva kwezinsuku ezi-5 ideskithophu ibingaziwa kusuka emsebenzini omningi kangaka, ingasaphathwa imibala akhethe ukuyenza ngokwezifiso: i-facepalm: yokuthanda, imibala.
gnome noma kde…. Imithetho evulekile ye-openbox 😛
Bengihlala ngithanda enye i-wm, hhayi ngoba i-pc yami i-violet noma ayinamandla amakhulu, ngikwazi ukugijima i-kde ngaphandle kwezinkinga kepha ngithanda ukulula, nginemenyu yokuvula izinhlelo zokusebenza, isikhathi, itreyi yohlelo, ne-taskbar ephelele , noma kunjalo, uma ngidinga ideskithophu ngiphendukela ku-xfce
Kimina, i-hipster ne-minimalist kakhulu ngamakhompyutha anamakhadi aqokiwe ...
Labo bantu abasebenzisa i-Gnome, i-KDE, i-WM, bajwayelekile kakhulu ...
Ukufunda nje lo mbhalo kungangishiya nesifiso sokucabanga ukuthi ngingaba ngelinye ilanga ukuzama isilo esinjengalesi. Lapho ngifuna ukubona okuthile okuhle ngobuhle esikhundleni sokuqala i-Debian ngiqala iWindows Vista yami nge-Aero nawo wonke ama-chirimbolos futhi ngiphinda ngiphinde ngibuke lowo mbono. Futhi uma ngifuna ukwenza konke okunye, khona-ke iDebian eneMate Desktop. Ukushintshwa koshintsho kukodwa, ngaphandle kwezinjongo ezicacile, ngaphandle kwesidingo, ngaphandle kokuxazulula noma iyiphi inkinga futhi esikhundleni salokho kuletha amakhanda ahlukahlukene, kungani ... Uma izilawuli bezingakwesokudla, yini ebinganikelwa ngokuziguqula ziye kolunye uhlangothi? Kungani ulahla okusebenzayo? Thatha isibonelo seWindows 8 kanye ne-Metro noma i-interface yaso yangaphambilini ... ayithandwa, akusizi ukusebenza ehhovisi futhi bekufanele babuyele emuva kwimenyu yokuqala yempilo yonke. Ngemuva kwalokho ngizoqhubeka ne-Debian yami nge-Mate Desktop, efanayo ngokubukeka kepha ngibe ngcono kune-Gnome yakudala. Yonke into iya lapho kufanele iye khona, konke kuyasebenza, kungasetshenzwa. "Uma kusebenza, ungayilungisi"
Hahaha cha, izinkinobho zewindi zingakwesokudla njengokujwayelekile. Ngicabanga ukuthi i-elav ibashintshele kwesobunxele ngasizathu simbe.
Ngivumelana nawe cishe kukho konke. Akunakuphikwa ukuthi ideskithophu enhle kakhulu futhi ezinye izinhlelo zokusebenza zibukeka zibabazekayo, njengesimo sezulu namamephu, kepha akusebenzi kakhulu ukusebenza. Akukho lutho olusebenzayo okufanele ngithi. Kungani baphikelela ekwenzeni umsebenzisi asebenzise uhlelo njengoba becabanga ukuthi kufanele lusebenze? Noma iyiphi enye i-DE isinika ithuba lokuyivumelanisa nokuthanda kwethu nezidingo zethu. Mina, i-KDE yami yehluke ngokuphelele kunendlela evela efemini ngoba ngiyivumelanisa nezidingo zami.
“I-GNOME ingenye yezindawo ezihamba phambili zedeskithophu ku-GNU / Linux, ngakho-ke ingenye yezindawo ezidume kakhulu. Yize kungeyona enye yezintandokazi zami »sikuqale kabi lokhu okuthunyelwe, iGnome ayiyona enye yezinto ezihamba phambili, imane nje ingenye yezidume kakhulu. Ideski elihamba phambili yilona elikhethwa yilowo nalowo, elithandwa kakhulu alifani nelingcono.
Uma kungcono noma kudume kakhulu kuphela ingxenye yokwazisa ngakunye, hhayi ngenxa yalesi sizathu okuthunyelwe kuqala kabi. Kodwa-ke, uma kungenye yezinto ezihamba phambili, empeleni, kimi kukhona OKUBILI KAKHULU, i-KDE ne-GNOME, abanye basebenzisa kuphela izicelo ezivela kulezi ezimbili.
Uma ngingaphazami i-Gnome Shell Client Side Decorations yafika unyaka ngaphambi kwama-CDE e-OSX. Ngakho-ke kwakuyi-OSX eyayikhuthazwe yiGnome Shell, hhayi enye indlela ezungezile. Sazise kangcono kancane ...
Que? Mhlawumbe igama elithi CDE lafika kuqala ku-GNOME, kepha ku-OS X bekuyisikhashana, kepha kudala, lelo bha yesihloko ngokuhlanganiswa kwebha yamathuluzi. Noma kunjalo, uma unemithombo ongaphikisana nayo kangcono ngokuphawula kwakho, sicela ungabathumeli.
Angazi ukuthi kufanele yini:
Kukhona ukuxhumana esihlokweni esivela ku-2011 lapho kubonakala khona ukuthi lolu shintsho luhlelwe kusukela ngalowo nyaka.
Bengibheka futhi ngokusobala ngiyasithokozela lesi sici ku-OS X Yosemite, inguqulo yangaphambilini yale OS yiMavericks futhi njengoba bengibona lapho bebengakasetshenziswa. Njengoba i-OS X yaphuma ngo-2014, noma cha? Futhi iGnnome Shell 3.10 yaphuma ngo-2013, kuleyo nguqulo i-CSD yethulwa. Ngakho-ke uma ngingenaphutha, iGnome yeza nayo kuqala futhi i-OS X yayisebenzisa kamuva. Vele ngibheke kuphela izinsuku zezindatshana ze-blog nezithombe ukusho lokhu, angiwazi ngokuphelele umlando walaba ababili. Ngingahle ngibe nephutha, uma kunjalo, ngilungise.
Ngendlela elav, yi-CSD hhayi i-CDE (iKlayenti Side Imihlobiso ngokusho kwe-development.js)
Ake sibone, kungenzeka ukuthi bakopishe ukwakheka kwe-Epiphany njengoba i-athikili ye-MuyLinux isho, mhlawumbe kungenjalo, noma kunjalo, ukuba nezinkinobho ze-Close / Minimize / Maximize ezingeni le-toolbar kuyinto okuthi uma ngingaphosisi ubekhona isikhathi eside ku-OS X (noma kungezona zonke izinhlelo zokusebenza). Noma kunjalo, akunandaba ukuthi i-GNOME iyethule ngo-2011, yaqala ukuyisebenzisa ngo-2014/2015 .. ngakho-ke eyokuqala ukushaya, yashaya kabili ..
Ngivele ngalungisa i-CSD, ngihlala nginephutha futhi ngifaka i-CDE, engiyitholile kusuka lapha, yingakho ukudideka.
Ummeli kaDeveli kusho
Ngicabanga ukuthi umqondo ophilisa leli deski udidekile. I-KDE izoba nezinketho eziningi, kepha kungani sifuna zonke zifakwe futhi zithathe isikhala sediski, nayo yonke imitapo yolwazi yazo, uma sizosebenzisa kuphela ama-20% azo?
IGnome incane kakhulu, kangangoba singaphuthelwa izinsiza eziningi. Kepha yilokho izandiso okungezakho, ukufaka ideskithophu ekusetshenzisweni esifuna ukukunika kona.
Kubonakala kimi ukuthi indlela ye-GNOME inengqondo kakhudlwana, okuwukuphela kwento eyenzekayo ukuthi yenziwa kabi, ngoba ngenguqulo entsha ngayinye izandiso ezindala azisasebenzi.
Ukube le nkinga yokuhambisana ibingaxazululwa, ubungafaka noma yini ewusizo ngendlela osebenza ngayo, okuholela ekubeni nedesksi elilula futhi elijwayelekile, elilungiselelwe ukusetshenziswa ozoyinika lona, ​​hhayi inani lotshani obungenamsebenzi i-KDE inayo nokuthi kufanele ugwinye nayo noma ngabe uyayisebenzisa noma cha.
Phendula Kummeli KaDeveli
Yebo, kepha njengoba kuyisoftware yamahhala futhi ingxenye ngayinye yenziwa ngubani futhi nini lapho befuna, indlela ye-KDE ingcono impela ngoba lapho konke sekukhona nohlelo, lapho bekukhipha wenza isiqiniseko sokuthi bahlole konke noma okuningi. Ngenkathi siku-Gnome, lapho beyikhipha ku-beta ukuthola izimbungulu, njengoba abahloli bengasebenzisi izandiso eziningi futhi bengayiboni ngokusobala kumamenyu, basala bengasebenzi ngisho nakuhlobo olusha.
Sawubona John. Ngokuqondile, uhlelo olusebenzisa izandiso luyinhlekelele, kepha lokho akusho ukuthi lo mbono we-modularity, wokwelula ideskithophu ngezandiso mubi.
Kubukeka kungcono kimi kunaleyo ye-KDE, ehlanganiswe konke, noma ngabe uyayisebenzisa noma cha. Nginikeza isibonelo ... iBaloo, abantu abaningi abafuni ukuyisebenzisa ngoba isebenzisa izinsiza eziningi noma ngoba bacabanga ukuthi ibeka ubumfihlo babo engcupheni.
Bekungeke yini kube ngcono ukuthola inketho yokuyifaka noma ukuyikhipha ngokuchofoza okukodwa, njengesandiso?
Angicabangi ukuthi inkinga ngezandiso ihlobene nokuthi iyi-software yamahhala, ngicabanga ukuthi kungenxa yokuhlelela okungalungile noma ukungakwazi ukuya kuyo kahle.
Ngaphambi kokukhipha inguqulo entsha, yi-Gnome okufanele iguqule izandiso ezindala ukuze zisebenze kahle, ngokuthile okusekhasini elisemthethweni, ngicabanga ukuthi uma zingakwenzi kungenxa yokushoda kwezinsizakusebenza.
Lokho ebengifuna ukukugqamisa ekuphawuleni ukuthi i-KDE neGnome yimibono emibili ehluke kakhulu yedeskithophu, ngakho-ke kubonakala kimi ukuthi ukuqhathanisa akukho ndawo.
Kufana nokuqhathanisa i-lxde ne-kde, kuyimiqondo emibili ephikisayo efuna izinhloso ezihluke kakhulu. Angiliboni iphuzu lokuthi, i-kde inalokhu kusebenza futhi i-gnome ayinayo, awu, yebo, ayinayo, ngakho-ke ini? lokho ukuthi kuwusizo lwakho kakhulu angikusebenzisi nhlobo, ngakho ...
I-Baloo ingavalwa ngokucindezela i-CheckButton 😉
Kuyiqiniso, i-KDE nayo yonke leyo ndawo yesikhala .. njengamanje amadrayivu anzima eza aqine!
Izandiso ze-Gnome zingcolile, ngoba njengoba uncike kulokho okungabuyekezi kusuka kolunye uhlobo kuya kolunye, kufanele ulinde noma ugoqe imikhono yakho ufunde ukuthi ungayenza kanjani isebenze ...
Sawubona Fistro, akusiwo umbuzo wesikhala onaso kwi-disk, kungumbuzo wokuthi usibambe ngalokho okusebenzisayo noma ofuna ukukusebenzisa. Isibonelo, kuleso sikhala esinezinketho ze-kde engingasoze ngazisebenzisa, ngincamela ukuba ne-starwars trilogy, inkosi yamasongo, i-hobbit kanye ne-matrix ngokwesibonelo. Njengoba ukwazi ukubona, akuyona into enye oyithandayo.
Mayelana nezandiso, ngivumelana ngokuphelele nawe.
Okokuqala ngiyakuhalalisela ngendatshana, konke okuhlobene neGnome kuyangijabulisa. Njengamanje ngine-Ubuntu Gnome 14.04 efakwe nemvelo yeGnome 3.10.4. Umbuzo wami ukuthi uma ngibuyekeza inguqulo yeGnome ngilahlekelwa ukuzinza noma ukwamukelwa kokhiye bokusebenza bencwajana yami ...
Ngihlala neGNOME impilo yonke….
Kukulungele 😉 http://goo.gl/2DwEhQ
I-elav ukuthi imnandi kanjani itimu ye-plasma yesikrini sakho. Ungangitshela igama? Sanibonani
KUNGUMOYA, kepha izithonjana zethreyi zivela kutimu yePlasma ebizwa nge-KDE5.
okwesibili ukuthi umsebenzisi wePlasma (kde) akhulume ngeGNOME kufana nokuthi ubeka umbandlululo phambi komuntu omnyama ...,
Okwesithathu: Ngibheka i-GNOME njengeFirefox isiphequluli esiphelele lapho ufaka khona izandiso ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwaso futhi ukwenze kube ngokwakho, njengeGNOME noma ungacabanga ukuthi i-firefox efaka zonke izandiso ezifana nalokho okuyiPlasma (kde )? , Ngifuna inketho yokuqala ..
Okwesine: uhlelo kwesinye isikhathi oludla ngisho i-1g yenqama futhi enguqulweni yayo yakamuva egcwele bug, angicabangi ukuthi kufanele kubizwe ngokuthi iyona ehamba phambili ...
Angazi ukuthi lokhu kuphawula kumayelana nani, kepha ngiyakuphendula:
Okwesibili: Nge-GNOME noma iyiphi imvelo yedeskithophu bengilokhu ngingakhethi. Ngiyakwazi ukubona okuhle nokubi kulowo nalowo.
Okwesithathu: Isifaniso asisebenzi kuleli cala, ngoba akusikho ukuthi iFirefox inezandiso eziningi ezifakiwe, kungukuthi iFirefox ingenziwa ngezifiso ize ifake ibha ye-URL ezansi, izinkinobho zokuzulazula ziye ku- kwesokudla, amathebhu angakwesobunxele, okungeke kusetshenziswe izandiso kuwo, kepha kungaba yinto yomdabu kuhlelo lokusebenza.
Okwesine: Ngicabanga ukuthi usho ukuthi i-KDE 5. Awu, njengamanje ngine-GNOME Shell efakwe kwikhompyutha yami yomsebenzi (ene-8GB ye-RAM), ne-KDE 4 kwi-Laptop yami (ene-6GB ye-RAM), kanye nokusebenza kwe-KDE kungcono kakhulu, njengokudla ngezicelo ezifanayo ezivulekile, yithi: I-Chromium, i-Keepassx, i-Dolphin / i-Nautilus, i-Synergy, i-Konsole / i-Gnome Terminal ..
Kunengqondo ukuthi i-KDE 5 isenezimbungulu zayo, intuthuko entsha ngokuphelele, kepha ingabe i-GNOME ayinazo?
Ngamafuphi Snow, impikiswano oyinyumba yini ozama ukuqala.
1 - Lapho umsebenzisi we-KDE ethi akayithandi iGnome, kufana neqhude lithukuthele futhi lithethise idada ngokungaculi ekuseni.
2 - Ngizizwa ngixakile lapho ngifunda lokhu okuthunyelwe lapho bathi iGnome ayisebenzi ngaphandle kwezandiso futhi ngiyabona ukuthi ngiyisebenzisa ngaphandle kwezandiso futhi cishe ngaphandle kwezindikimba. XD
Nami ngiyavumelana nalokho. Abantu abazi ukuthi ama-desktops asebenza kanjani, futhi ukusho ukuthi indawo efana ne-GNOME ayisebenzi ngaphandle kwezandiso, ayikhiqizi, njll ..., ifana nokungazi nokungazi, ngenhlonipho efanele. Baningi, abaningi bethu abasebenzisa i-GNOME 3 ngaphandle kwezandiso. Nginayo ngaphandle kwezandiso, ngoba njengoba kuza kimi kuFedora ukufaka nokusebenza, ukufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza engiludingayo, ama-codec nokuma okugcwele. Angidingi ukumisa cishe noma yini, ngiguqula ingemuva kanye nokumisa ngokugcwele. Nginguchwepheshe wezinhlelo, futhi ngisebenza nemibhalo, izincwadi, ukubonwa kanye nekhonsoli, yilokho engivame ukukusebenzisa, futhi akubeki ukuhlukumezeka, ngisebenza kahle nabo bonke. Ukusuka eGnome 2 kuya eGnome 3 kwaba yigalelo kwabaningi, kuhlanganise nami. Ngiyakhumbula ukuthi ngazama ukumnika amathuba amaningi ekuqaleni, emuva ku-2011, kodwa kuyiqiniso ukuthi leyo filosofi ayilethe nayo ayingikholisanga. Kungakho ngangibuyela ku-KDE (ebengikade ngiyisebenzisa kusukela ngo-2010) kepha kukhona engingakuthandi. Ngiyazibona izinzuzo zayo, amandla ezicelo zayo, kepha kubonakala kimi (impela, njengoba abanye besho lapha) ukuthi inkinga nge-KDE iyona kanye eyihlukanisa, amandla wayo wokwenza ngokwezifiso namandla wokumisa. Benza kube uhlelo olubuthakathaka, ngokuqinisekile olunamandla kangako kune-GNOME. Ngokuphathelene nokusetshenziswa kwememori, ngokumane kuvulwe i-Konqueror, i-KDE isivele isebenzisa i-1,2 GB. Engxenyeni yeGnome neFirefox. Ngemuva kwalokho i-KDE uyenza ngezifiso noma ngabe ufuna isikhashana, kepha kuyiqiniso, ukuthi kwesinye isikhathi kubonakala sengathi ukwenza okuthile ngokwezifiso "kuyakhohlwa" uma usuqale kabusha umshini. Futhi-ke ayihlangene ngalutho nokuphikisana okuhle kwamanethiwekhi omphakathi kanye / noma ama-akhawunti nedeskithophu njengaleyo ene-GNOME. Lesi yisinyathelo esihle sale desktop yokugcina, okushiwo ngayo okuncane: ukuhlanganiswa okuphelele kwedeskithophu namanethiwekhi anayo iGnome, nokuthi kumasekhondi ambalwa kwenza uhlelo luphathe ngokuzenzakalela futhi luvumelanise imibhalo, izithombe, isitoreji, ama-imeyili, izintandokazi , oxhumana nabo nekhalenda nemisebenzi. Kuyamangalisa. Ekugcineni lapho ngibuyela ku-GNOME futhi ngibona izinzuzo zayo, izinguquko zayo ezinengqondo kakhulu kunalezo ezafika ekuqaleni kwegatsha lazo, kanye neparadigm yayo kanjalo, ngahlala nayo. Umuntu uyabona ukuthi bengingadingi ibha yomsebenzi, amadokhumenti, ukunciphisa noma ukukhulisa, konke kuhlangana kahle nangomzuzu, futhi ngibonile ukuthi mangaki amalungiselelo engiwalondolozayo nale ndawo. Bengivele ngishilo, zingama-paradigms ahlukile wedeskithophu, kepha ngicabanga ukuthi ngokwezinsizakusebenza, njengamanje, iGnome ingcono kakhulu, ngicabanga nokuthi inamandla futhi ihlanganiswe ngokwengeziwe, futhi nokuhlanganiswa ekuhlinzeka ngeposi, amakhalenda, ama-akhawunti aku-inthanethi, kuvela ke okungcono kakhulu engake ngakubona.
Ngikuthola kukuhle ukuthi abantu basebenzise leli noma elinye ideski noma sengathi abafuni nokusebenzisa. Uma othile eyisebenzisa, kuzoba ngoba ayayithanda, angicabangi ukuthi abantu bavulekela phezulu ngokusebenzisa into abayizondayo usuku nosuku. Lokho kusho, manje ngisebenzisa umbono wami futhi ungasho nokuthi, kunokuba ngizizwe nginombono lapho ngisebenzisa iGnome: IGnome ingenza ngibe novalo, iGnome idala ukucindezeleka. Futhi konke ngenxa yendlela ephatha ngayo amawindi nephaneli. Mhlawumbe kuyinkinga yezinzwa zami enginayo, kepha ukubheka nje isithombe-skrini seGnome kunginikeza ama-goose bumps futhi i-cramp yehla yenyuka nomgogodla wami.
Yebo, kuyinkinga yakho uqobo. Inhlanhla ekuhlaziyweni.
okufakwayo! Ngincamela ideskithophu yomlingani
Kuyiqiniso ukuthi bashintshe indlela yokusebenzisa kakhulu, futhi umuntu osanda kuyizama ushayisana (futhi ngamandla kakhulu) nalokho. Kepha uma usisebenzisa isikhashana uqala ukuyithanda.
Udaba lokungabi nayo ibha yomsebenzi ngokwesibonelo. Endlini yami ngineGnome Shell ne-windos7 emsebenzini, awukwazi ukucabanga ukuthi zingaki izikhathi engizithole sengithatha igundane ngokushesha ngiyisa ekhoneni ukuze ngishintshe izinhlelo zokusebenza noma ngivule okuthile, futhi ngibheke esikrinini ngididekile lapho ngingatholi mpendulo. Kuzwakala kungajwayelekile, kepha uma ukujwayela, kushesha kakhulu ukuthola izinto ngaleyo ndlela. Kufana nokubheka ibha yomsebenzi xD
Ngokuvamile, izinto okhomba kuzo yizindaba zokunambitheka, kepha engizovumelana ngakho yisihloko seNautilus-Dolphin. INautilus ayihlanganise lutho lapho, iDolphin iyamchoboza.
Kwenzeka into efanayo nakimi. Awuqapheli ukuthi i-GNOME ishesha kangakanani futhi inembile kuze kube yilapho kufanele "ubhekane" nolunye uhlelo noma imvelo. Futhi ukusebenza ne-W7 ngazibona kaningi ngithatha isikhombisi segundane ngakwesokunxele esingenhla, ngethemba lokubona izinto zami zivulekile, kepha cha, bekufanele ngiseshe ngithinte ibha yomsebenzi.
Kuhamba kanjani ukusetshenziswa kwenqama? ngigcina ukusebenzisa i-gnome ibigwinya i-1GB ngaphandle kohlelo lokusebenza olusebenzayo.
i-gnome-shell, imvamisa kimi, idla phakathi kuka-70MB kuye ku-180MB, kusetshenziswa isikhathi esingaphezu kwesonto. Lokhu kunjalo, kwi-PC ene-GB eminingana ye-RAM. Ngikubuyekezile kokunye okunomkhawulo futhi ukusetshenziswa kwayo kuvinjelwe kakhulu (phakathi kuka-50MB), esivivinyweni esisheshayo.
Into edla kakhulu i-RAM kwi-PC ejwayelekile yisiphequluli sewebhu. Ngibone i-Chrome ithatha kufika ku-3GB ukuyisebenzisa. Mhlawumbe kukhona uhlelo lokusebenza oluqala ngokuhlangana nedeskithophu futhi oluthatha inkumbulo engaka.
Ukufunda okunye ukuphawula ngithola umbono wokuthi abanye abantu abakaze bazame iGnome Shell isikhathi esingaphezu kwesigamu sehora. Ushintsho olungazelelwe lweparadigm futhi into yokuqala engaba ukufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani, bese ukhetha enye noma enye enye indaba.
Ngibonile ukuthi kunabantu abacabanga ukuthi uma kuhamba kancane noma kungasebenzi nemibhalo eminingi evulekile. Lokhu akulona iqiniso, mhlawumbe abakatholi ukuthi bangakwenza kanjani eGnome Shell, ngiyakuqinisekisa ukuthi konke kutholakala ngendlela enqamulelayo nokuchofoza okukodwa noma okubili kakhulu (ngivame ukusebenza ngamatheminali avulekile angama-6 noma ama-7, ama-PDF angama-6 noma ngaphezulu, isiphequluli, iklayenti leposi nemibhalo ehlukahlukene yombhalo). Ngokwami ​​ngisebenzisa izindawo zokusebenza ezinamandla ukuhlela ngezinhlobo zohlelo futhi ngisebenzisa kakhulu ukhiye weSUPER (iWindows kumakhibhodi amaningi) ukuhamba phakathi kwawo, khetha amawindi noma uvule izinhlelo / amafayela amasha.
Umehluko omkhulu engiwubonayo phakathi kwe-KDE neGnome Shell ngokuya ngefilosofi yokuklama ukuthi owokuqala unawo wonke amathuluzi atholakalayo futhi ungawakhubaza noma ungawasebenzisi futhi okwesibili unezisekelo ongazisebenzisa futhi ungangeza amathuluzi amasha njengoba eba. kudingekile.
Ngingumklami futhi angiyithandi iGnome ... kimi inkosi yobulula iseyi-xfce.
Kunemininingwane ekwakhiweni nasekubekweni kwezinkinobho ezingenza ngibaleke lapho, mhlawumbe ngijwayele kakhulu iXubuntu XD
UFaustino Aguilar kusho
Izindawo eziningi zedeskithophu nami lapha sisebenzisa i-Canonical's Unity 😐
Phendula uFaustino Aguilar
Amazwana engihlala ngiwafunda yonke indawo ukuthi iGnome ibhekiswe kumathebulethi hhayi kudeskithophu ... Eqinisweni, akulona iqiniso elingu-100%. E-Gnome bacabanga nge-desktop ukuthi isebenzise amandla esikrini sokuthinta (esaziwa kakhulu), yize ngiyaqonda ukuthi lokhu akukabi yi-100% okwamanje (ukufudukela eWayland akukho). Kepha isebenza kahle kwi-laptop noma ideskithophu isebenzisa ikhibhodi. Kuwo wonke ama-desktops engiwasebenzisile, iGnome iyona "ikhibhodi enobungane" kakhulu, okulula ngayo ukuvula izinhlelo zokusebenza (igama le-Super + application + enter), shintsha phakathi kwama-aps, shintsha ama-desktops, uphendule masinyane emiyalezweni, njll. Lokho kuyinzuzo enkulu ukuphawula okumbalwa
edgar hdz kusho
Kusukela ekuzalweni ……
Phendula u-edgar hdz
Sawubona, into ebengihlala ngiyisebenzisa, ayisasebenzi ku-GNOME 3.16.
Into elula njengokukwazi "ukuxhumanisa ifolda noma ifayela" kusuka ku-FILES !!!
Ngihlala nginezingxenye zami:
/ idatha (lapho ngishiya khona zonke izithombe zami, amavidiyo, njll)
Ngakho-ke, ngihlala ngakha isixhumanisi sefolda ekhaya lami ku / idatha / Imibhalo (ngokwesibonelo).
Yebo, leyo nketho eyisisekelo ihambile!
Ukuxazulula lokhu kushoda, bekufanele ngingene ekhaya lami eDebian kwenye iLinux yami (i-Debian) bese "ngikopisha" izixhumanisi ezenziwe ekuqaleni, ngaleyo ndlela zisebenza.
Inketho yokwakha izixhumanisi isala, kufanele nje uhudule ifolda noma ifayili ngenkinobho ephakathi bese uyiphonsa lapho ufuna khona izixhumanisi (kungenziwa ngamafayela namafolda amaningi ndawonye)
ps: lapho okuthile kungenakwenziwa ngesibonisi sokuqhafaza kuhlale kunokunye ukukwenza ngokubulalayo, kulokhu nge:
ln -s / data / Imibhalo $ IKHAYA / Imibhalo /
ngale ndlela yonke into kufolda yakho Yemibhalo izogcinwa ekwahlukanisweni kwedatha.
Ukwehlisa idrayivu ye-USB ngaphandle kokuthi uvule ama-nautilus (amafayela) simane sihambisa isikhombisi segundane ezansi kwesikrini (noma yikuphi ngezansi) umzuzwana bese ibha yesaziso izokhonjiswa, simane sikhethe idrayivu ye-USB bese sicindezela inkinobho yokwehla futhi yilokho kuphela
Ngokubona kwami ​​bazuza lokho ifilosofi yabo ephathelene nakho. Futhi ngiyayithanda ngoba ayiyona yesimanje noma eyemfashini kuphela. Izindlela zokuhlangana ezincane zihle kepha futhi kungasho umthwalo omncane kwiprosesa.
Ungachaza ubuhle bakho kwi-Gnome ngamagama amabili: ubuncane futhi obungokoqobo.
Ukusebenziseka kwayo futhi kuya ngezandiso ofuna ukuzengeza.
Angiceli okungaphezulu kokunikezwa yile ndawo. Ukube bengingumlandeli wemiphumela yokuqhafaza noma ukwenza ngokwezifiso okuphezulu, iGnome bekungeke kube indawo engiyithandayo.
Abaningi bakopishe imibono kugobolondo le-gnome